कोरोना भाइरसको म’हामारीले निम्त्याएको परदेशीको पि’डा – कतार, दुबई, मलेसिया जता हेर्यो उतै उस्तै स’मस्या छ – Butwal Sandesh
कोरोना भाइरसको म’हामारीले निम्त्याएको परदेशीको पि’डा – कतार, दुबई, मलेसिया जता हेर्यो उतै उस्तै स’मस्या छ
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले हामी परदेशमा रहेका नेपाली पनि प्रभावित भएका छौं । अझ यसको असर मध्यपूर्वका देशमा कार्यरत हामीलाई धेरै परेको छ । अहिले विदेशमा कार्यरत नेपाली कुनै न कुनै रुपमा अनेकन समस्यासँग जुधिरहेका छौं । धेरै जनाले रोजगारी गु*माएका छौं । कतिपयको कम्पनी नै बन्द भएको छ । अ*लपत्र परेका छौं । दिन बित्दै जाँदा समस्यामा पर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । काम चलिरहेका कम्पनीले पनि कामदार तथा कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।
विदेशमा साँच्चैभन्दा कोरोना सुरु भएपछि समस्या माथि समस्या थुप्रंदै गएको छ । पी*डा, भो*क, रो*ग र शो*कमा परेका हामी महिनौंदेखिको लकडाउनमा फसेका छौं । कतिपय त आफैं टिकट काटेर घर फर्किंएका छन् भने कतिपयको त जान सक्ने वस्था छैन । त्यसमाथि सामान्य भन्दा दुई गुणा बढी महंगो टिकट कसरी काट्नु ? अलिकति पैसा हुने अप्ठ्यारोमा परेका टिकट काट्न सक्ने, कम्पनीले दिने टिकट भएकाहरूको दूतावासको गेटसम्म पुग्दा पनि दूतावासले उत्तिकै समस्या भएका हजारौंको भिडमा थोरैको मात्र नाम लिकालेको छ ।
त्यसैमाथि एकपटक निर्धारण गरिसकेको जहाज उडानको तालिका छिन छिनमा परिवर्तन गरिरहन्छ । यो विषयमा न त कसैले किन यस्तो भएको भनेर प्रश्न नै गर्छ, न त दूतावास आफैंले यस्तो गर्न छाड्छ र सजिलो उपाय अपनाउन नै सक्छ । सरकार तथा दूतावासको यस्तो अपरिपक्व व्यवस्थापनको सिकार हामी सोझा नागिरकले कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो ? हरियो पासपोर्ट बोकेर दूतावास कति धाइरहने ? यदि यस्तै गतिले स्वदेश लैजाने हो भने ६ महिनामा पालो आउला जस्तो लाग्छ ।
यस्तो क*ष्टकर अवस्था र तीतो यथार्थलाई सम्बन्धित निकाय र सरकारले नबुझ्दा हामीहरुलाई राज्यविहीनताको महसुस हुन्छ । त्यही भएर त कति डि*प्रेशनको शि*कार भएका छन् । आ त्मह त्याको बाटो अंगाल्न बाध्य भएका छन् । हाम्रा पी*रमर्का सम्बन्धित निकायले नसुनिदिएपछि सामाजिक सञ्जालमा रोइकराइ गर्नुको विकल्प नै रहेन । अब त आशा–भरोसाको सीमा नाघ्न लाग्यो । हे सरकार, नेपाल हाम्रो रेमिट्यान्सको योगदानलाई नभुलिदिनुहोस् ।- बिर बल खड्काको फेसबुक वालबाट।